Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. आव २०७४-०७५ मा १६८ को सवारी दुर्घटनामा मृत्यु – Emountain TV
आव २०७४-०७५ मा १६८ को सवारी दुर्घटनामा मृत्यु
काठमाडौं, ३१ जेठ । काठमाडौं उपत्यकामा दुर्घटना डरलाग्दो रुपमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को जेठसम्ममा झण्डै छ हजार दुर्घटना भएकोमा मृत्यु गराउने दुर्घटना मात्र एक सय ६८ छन् । मृत्यु हुनेगरी दुर्घटना गराउनेमा सबैभन्दा अगाडी ट्रिपर र ट्रक देखिएका छन् ।
उपत्यकामा गएको ११ महिनामा भएका दुर्घटनामा एकसय ६८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४-७५ को जेठ ३० गतेसम्ममा भएका पाँच हजार ७ सय २८ दुर्घटनामा परि एक सय ६८ जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्युसम्म पुर्‍याउने दुर्घटना गर्नेमा ट्रिपरका कारण १९ र ट्रकको कारण १८ छन् ।
दुर्घटना गराउने चालकको उमेर २१ देखी ४० वर्ष देखिएको छ भने बढि दुर्घटना मध्यान्ह १२ बजेदेखि देखी ६ वजेको समय देखिएको छ । अधिकांश ट्रिपर चालक कम उमेरका हुने र वेपर्वाह हाक्ने गरेका कारण दुर्घटना बढि हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । युवा जोसमा सवारी हाक्ने, मौसमको अवस्था, मादक पदार्थ सेवन दुर्घनापछिको तोडफोड, ओभरटेक गर्ने तथा ओभरलोड दुर्घटनाका कारण भएको प्रहरीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा त झन ट्रक तथा ट्रिपरका कारण मात्र उपत्यका एकहजार चारसय दुर्घटना भएका थिए । त्यसका कारण सर्वसाधारण टिपर देख्नासाथ डराउने अवस्थामा छन् ।
अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम कानुन फितलो भएका कारण दुर्घटना हुँनासाथ घाइतेहरु मारिने गरेको बताउछन् । कानुनका छिद्र प्रयोग गर्नकै लागि मानिसको हत्या शैलीमा व्यक गरेर मार्ने प्रवृति रोक्न कानुनको छिद्र टाल्न आवश्यक छ ।
सँगसँगै दुर्घटनाकोे कारण बनिरहेको ठुला र साना सवारीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि रोक्न आवश्यक छ । ट्राफिक नियमलाई नियम नभएर आचारसंहिताका रुपमा सबैले स्वीकार नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नरोक्ने हो भने दुर्घटनाको दर कम हुन सक्दैन । यसतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।